Lavon’ny Coronavirus ny Dr Razafindranazy
Dokotera maty tao Toamasina Tsy nananton-tena izany, hoy ny fianakaviany !
Notsipahan’ny fianakavian’ilay mpitsabo maty tao Toamasina ny alahady lasa teo ny filazana fa nananton-tena ity dokotera ity. Tsy karazan’olona hamono tena izany ny dadako, hoy ny zanany vavy raha nanaovan’ny mpanao gazety fanadihadiana izy ireo. Aretin-kibo mahery vaika na “douleur abdominale intense” no niandohan’ny nahazo an’i Dr Daniel
Lova Renée, 8 taona : Te ho lasa Dokotera na Mpanao Gazety ...
Zazavavikely 8 taona monina any Toamasina i Lova Renée. Tao anatin’ilay “video” na horonan-tsarimihetsika noforoniny mikasika ny Coronavirus izay niparitaka tany anaty tambajotran-tserasera sy tamin’ny fahitalavitra no namantaran’ny maro azy voalohany.
Toamasina : Dr Daniel, hita faty niantona tao amin'ny "Manara-penitra"
Mpitsabo tonga hanao fizaham-pahasalamana tao amin'ny efitra misy marary iray ao amin'ny hopitaly Morafeno na ny hopitaly manara-penitra ao Toamasina no nahita fa efa nisaringotra tamin'ny tadin'ny serum nampiasaina taminy ny tendan'ny marary iray. Mpitsabo vao naiditra hopitaly ny asabotsy lasa teo ity hita niantona ity.
Zoto 5 mianaka : Voaendaka teny Mahitsy!
Ny alakamisy hariva, tokony ho tamin’ny 5 ora sasany tany, no nigadona tao Mahitsy i Zoto 5 mianaka. Noho ny habetsahan’ireo olona nijery sy nitsena azy ireo tao Mahitsy anefa dia voaharom-paosy i Zoto ka very vola.
4 mianaka tra-doza : Ilay zaza 12 taona ihany no avotra
Efa-mianaka niandriaka an-dranomamy tany amin'ny distrikan'i Soanierana Ivongo no tra-doza tany an-toerana. Maty tsy tra-drano noho ny loza nahazo azy ireo tamin'ilay lakana hazo ny mpivady miaraka amin'ny zanany kely vao 4 taona monja.
Ryan Reyes, filipiana Matin'ny Covid-19 tao Ambatovy
Ryan Reyes, teratany filipiana iray no fantatra fa maty ny alin’ny alatsinainy teo tao amin’ny toeram-pitsaboana ISOS ao amin’ny Ozinina Ambatovy ao Toamasina noho ny aretina COVID-19.
Eugène, 62 taona : Sempotra ary nitsirara tampoka...
Raim-pianakaviana 62 taona i Eugène Rakotozafy. Tokony ho tamin'ny 9 ora maraina teo, omaly dia, nianjera nanoloana ny fivarotam-panafody iray tetsy Ankazomanga ny tenany.
Iray tamin’ireo zanany no namoaka ny fampilazana tao anaty tambazotran-tserasera Facebook fa nodimandry vokatry ny aretina coronavirus ny dokotera Razafindranazy Jean Jacques.
« Ny raiko, ilay lehilahy mahery » hoy ity zanany mitantara ny fitiavan’ny rainy ny asany ka nikirizany hanampy ireo mpiara-belona aminy. Raha tokony efa nisotro ronono mantsy ity rainy ity dia mbola niasa ihany, ary namela ny fianakaviany mihitsy aza, noho izany. Mitantara mantsy io zanany io fa mbola avy niala sasatra taty Madagasikara ny rainy, salama tsara saingy nahery loatra ity tsimokaretina ity ka izao nitondra azy ho any amin’ny fahafatesana, teo amin’ny faha-68 taona izao. Araka ny vaovao navoakan’ny France 3 Hauts-de-France dia efa narary nandritra ny telo herinandro izy. Nampidirina hopitaly tao Compiègne, Frantsa, ary nanomboka teo no niharatsy ny fahasalamany. Nafindra tao amin’ny hôpitalin’i Lille ary izao nodimandry izao. Raha ny fantatra dia voan’ity tsimokaretina ity ihany koa ny vadiny, izay mpitsabo mitovy aminy fa nijanona nanao « quarantaine » tao an-tranony ka tsy afaka nanaraka azy. Mampahatsiahy hatrany ireo zanany fa tsy tokony ho hamaivanina mihitsy ity aretina ity. Ny Dr Razafindranazy Jean Jacques no voalaza fa mpitsabo voalohany nodimandry, tany Frantsa, vokatr’ity tsimokaretina ity.